Maxaa looga hadlayo kulanka maanta ee Golaha Shacabka BJFS ? – Idil News
Maxaa looga hadlayo kulanka maanta ee Golaha Shacabka BJFS ?
Xildhibaanada Golaha Shacabka BJFS ayaa maanta oo Isniin ah kuna beegan 16-ka November 2020 waxa ay yeelanaya kulankoodii caadiga ahaa, iyagoona ka wada-hadlaya saddex ajende sida ku cad fariinta loo diray Xildhibaannada Baarlamaanka Soomaaliya.
Qodobada maanta horyaalla Golaha Shaabka waxa ay kala yihiin:
1-U codeynta Xubnaha Guddiga Adeega garsoorka, xili ururka Qareennada Soomaaliyeed uu ku baaqay in uusan golohu ansixin, maadaama si sharciga baalmarsan ay ku magacaawday Xukuumaddii Xil-gaarsiinta 30/7/2020.
2-U codeynta xubnaha Guddiga la dagaalanka Musuq-maasuqa oo loo gudbiyay golaha shacabka si xubnahaan oo shaqadoodu tahay la dagaalanka is daba mareynta ay u shaqo galaan.
3-Aqrinta 3aad ee Hindise sharciyeedka Nootaayooyinka Soomaaliya & u codeynta, maadaama sida uu dhigayo habraaca Golaha Shacabka ee aqrin marinta Xeerarka loo gudbiyo.